Hamro Kantipur | जसपा फुटको संघारमा,कस्लाई कस्को साथ ? जसपा फुटको संघारमा,कस्लाई कस्को साथ ?
जसपा फुटको संघारमा,कस्लाई कस्को साथ ?
२०७८ जेष्ठ १७
काठमाडौं, १७ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निश्चित जस्तै भएपछि फुटको संघारमा पुगेको हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपाल एकीकरण भई बनेको जसपा एकीकरणको १३ महिना मात्र भएको छ । एकताको १३ महिनामै जसपा फुट्न लागेको हो ।
जसपाको फुटको मुख्य कारण सत्तासंघर्ष रहेको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन् । ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न ठाकुर समूहले निरन्तर साथ दिदै आएको छ । ठाकुर समूह यसै हप्ता सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष भने ओलीको विरोधमा उत्रिएको छ । ओली सरकार ढाल्न बनेको विरोधी गठबन्धनमा यादव पनि छन् ।
जसपाभित्र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका अलावा कार्यकारिणी समितिका शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, चन्दा चौधरीलगायतको साथ छ । उनीहरु पूर्वराजपाका नेताहरु हुन् ।
मधेशको मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै गएको भन्दै उनीहरु फरक धारमा देखिएका छन् । ओलीले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता लिने प्रावधान खुकुलो बनाएका छन् । शपथ मातृभाषामा लिन पाउने देखि जसपा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गराएका छन् । यसलाई ठाकुर समूहले ठूलो उपलब्धिका रुपमा देखाएको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्ये ठाकुरको पक्षमा ३२ मध्ये आधा छन् । कार्यकारिणी समितमा उनी झीनो मतले अल्पमतमा छन् ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईका अलावा नेताहरु अशोक राई, महेन्द्र राय यादवलगायतको साथ छ । यादव पूर्वराजपाबाट उपेन्द्र समूहमा लाग्ने एकमात्र तत्कालीन अध्यक्षमण्डलका नेता हुन् ।
यादव समूह ओलीलाई संघीयताविरोधी, मधेशी, जनजातिलगायत अल्पसंख्यक समुदायका विरोधीका रुपमा चित्रण गर्दै आएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुमध्ये यादव समूहमा आधा रहेका छन् । कार्यकारिणी समितिमा भने यादव झीनो बहुमतमा छन् ।
कार्यकारिणमा को कता
उपेन्द्र यादव पक्षधर
डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव ,अशोककुमार राई ,महेन्द्र राय यादव. राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, युवराज कार्की,रकम चेम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु राउत ,हिसिला यमी, गंगानारायण श्रेष्ठ ,रनध्वज लिम्बु ,राम सहाय प्रसाद यादव, डम्मर बल्लभ खतिवडा, दान बहादुर ,विश्वकर्मा प्रकाश अधिकारी, मोहम्मद ईस्तियाक राई ,दुर्गा सोव ,परशुराम बस्नेत ,प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर शाह, सुशीला श्रेष्ठ, विजयकुमार यादव ,राजकुमार लेखी ,परशुराम खापुङ्ग ,हेमराज राई रहेका छन् ।
महन्थ ठाकुर पक्षधर
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव,सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, वृषेश चन्द्र ,लाल गोविन्द चौधरी, जीतेन्द्र प्रसाद सोनार, उमाकान्त झा, चन्दा चौधरी ,लक्ष्मणलाल कर्ण, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, नवल किशोर साह ,मनिष कुमार सुमन, अमृता अग्रहरी, रेशमलाल चौधरी ,राम नरेश राय यादव, केशव कुमार झा, अकवाल अहमद शाह, निर्जला राउत ,सुनिल कुमार झा रहेका छन् ।